Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Hilinkastoo Lamariyaba Haygeenu Waa Guul IA By Suleebaan.
Maqaal: Hilinkastoo Lamariyaba Haygeenu Waa Guul IA By Suleebaan.
Posted by Dulmane	/ February 9, 2019
Maalmuhu way isbada socdaan, Habeen iyo Maalin waa sidoodii, Dhulkuna wali wuu Goglanyahay.
Walina Kamay tagin Aduunyadu sidii aan ku Ogayn.
Wajiga Cusub ee Xisbiga ONLF uu dhabe ahaan ujeexday wakhti Xaadirkan waa mid laga baaraandagay, iyadoo la higsanayo Nabad ku soo dabaalida Gayigeena.
Waxaana Hubaal ah halgan waa halgan, labadii Mabda’e ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) waa Sidoodii markan balse waxaan Doorbidnay inaan Qalin ku raadino xuquuqdeena, taasi daadaalkeeda ayay ubaahantahay in loo xuubsiibto waana ta ina huran kalkan. Xikmada Odhanaysa hankaaga iyo Himiladaada wadooyin kala duwan ku day, ayaa ah ta ina hortaala.
Hogaaminta JWXO waxaa cad inay haystaan Qorsheyaal Cad-cad oo Itoobiya maanta isla jeexjeexeen, kolayna ay tahay in sida ku haboon wax loo maareeyo iyadoo markasta muhimada la siinayo wixii Danaheena ah, Siyaasadna aan ku jirno wajiyadeedana siday isugu imaanayaan loo Habeeyo.
Wadatashiguna waa waxtarkeena balse markasta waxaan uuga danbaynaynaa Hogaaminta Rug cadaaga ah. Laqabsiga xaaladaha kala duwan waa u dan Guusha aan Goobayno, tanaan dagay, isaguna taasuu dagay waa mid aan nolosha ka dhamaan marna. Dulucda hadalka halka uu u socdaa Waa Ceelka Salkiisa biyaha Xareeda ah ee dhex-jiifa.
Markaan leenahay waxaan haysanaa fursado badan kama dhigna wax kastana waa diyaar, balse waa mid u baahan in loo wajaho Dawgay lahayd. Mana noogo damaca halgamaagu sikastoo wax yahayba wadana ma waayo uu wax ku turxaan bixiyo idam Alle.
Xuquuqdeena ma aha mid la inoo tilmaami Tay tahay, wada kasta oo aan ku hanan karno waan Qaadaynaa, markay tahayna in la waayana jidkalaa inoo furan.
Waxaan u diyaar garoobaynaa tartanka Nabdoon, islamarkaasina aan ku rajo waynahay inaan ku xaqiijino yididiilooyinka aan leenahay Idam Alle.
Guushana waxaa iska leh, Xaqa iyo Ehelkiisa!
Midnimadeenuna waa Guusheena.